Plex.Earth 3.0 Ibu Ibu WMS ọrụ si AutoCAD - Geofumadas
Plex.Earth 3.0 Ibu Ibu WMS ọrụ si AutoCAD
Ọktoba, 2012 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps
Enwere m Plex.Earth 3.0 mbụ, nke m nwere oge ịnwale mgbe ị na-akọwa njirimara dị na njedebe ikpeazụ. Ikekwe na ọnwa nke ọnwa November nke 2012.
Gbaa na AutoCAD 2013
Ikekwe akwụkwọ kachasị mkpa, bụ na a na-akọwa ụdị a maka AutoCAD 2013, ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime nsụgharị ya (Civil 3D 2013, AutoCAD Map 2013, wdg).
Nke a dị mkpa banyere, dị ka AutoDesk a version na-eweta nwere nkwarụ ike mbubata Civil 3D Google Earth image na digital nlereanya, nkwekọrịta na nke na-agba ike na mere Plex.Earth na aga na nsụgharị, dị nnọọ ka m kwuru banyere ya ụbọchị ahụ anyị metụrụ nsogbu a aka ma ọ bụ iwu na-akwadoghị ma ọ bụ na ọ bụghị.
Banyere ụdị a, PlexScape nwere nkwekọrịta nke ya na Google iji nwee ike ibubata onyonyo ahụ, mekọrịta, webata grid na akara akara. Ọ bụ ezie na AutoCAD Civil 3D 2013 anaghịzi enye gị ohere ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụ onyo grayscale yana mkpebi adịghị mma.
Nkwado maka ọrụ WMS
Ụdị a na-eweta na taabụ Plex.Earth - Map Explorer, nhọrọ iji kwado ọrụ nlekọta weebụ, nke na-adọrọ mmasị n'ihi na ruo ugbu a ọ dịghị onye ọrụ AutoCAD ga-achọ nke a nke mere naanị 3D.
Echetara m na na nsụgharị ndị gara aga ihe m mere bụ ibu WMS na Google, ọ bụrụ na ọ kwadoro ya ma si ebe ahụ m webata ihe oyiyi ahụ. Enwere ike ịchọ ọrụ ugbu a site na url kpọmkwem ma ọ bụ mpaghara mpaghara. Ọ na-adọrọ mmasị, n'ihi na ị nwere ike ịhọrọ ọkwa ndị dịnụ dị ka eserese na-esonụ.
Enwere ike ịchekwa ya dị ka xml na faịlụ ndọtị pxmap, ma dị ka egosiri, lee ikpe a, nke akọwapụtara oke PNOA na Cadastral Cartography layer nke Spanish IDE. Mgbe ahụ faịlụ nwere ike na-akpọ na n'ígwé na-ama ahazi.
Ozugbo a kọwawo ọrụ ahụ a na-eji eme ihe, ọ nwere ike ịbịnye ya n'ime otu ihe oyiyi, ụdị mosaic ma ọ bụ ụdị ihe oyiyi polygon dị iche iche dịka anyị mere na Google Earth. N'ebe a bụ ngwá ọrụ iji kpochapụ akụkụ nke ihe oyiyi ma ọ bụ jikọta ọtụtụ n'ime otu.
Nke kachasị mma, ị nwere ike ịchọ eserese dịnụ site na mba. Enwere m mmasị n'echiche a, ebe ọ bụ na ọ na-eduzi onye ọrụ AutoCAD nkịtị, onye na-abụghị ọkachamara GIS mana onye na-edepụta akwụkwọ, onye na-atụghị anya ịmatakwu ihe gbasara IDE, kama ọ na-enwe ihe ndabere maka ọrụ ọ na-emepe. Yabụ ọgụgụ isi nke ndị Greek Greek Plex.Earth na-eme ka azịza ya dị mfe:
Ebee ka ị nọ? Nke a bụ maapụ ọ nwere!
Ihe arụmọrụ dị na rịbọn na ogwe ngosi gosipụtara ka mma. Ngwaọrụ ndị anyị mara na mbụ dị na taabụ nke abụọ: Plex.Earth - Google Earth, ebee ka nhọrọ nke mbipụta nke AutoCAD gaa Google Earth, mbubata nke oyiyi dị na mosaic, polygon ma ọ bụ ụzọ na okike nke ihe dijitalụ na esemokwu site na Google Earth na AutoCAD.
A na-ahapụ taabụ nke atọ Plex.Earth - Extensions, ebee ka ngwá ọrụ maka nhazi nke ihe oyiyi, mmepụta nke na-ebupụta na ntụgharị nke nhazi site na WS ọrụ na ihe ị nwere ike ịhụ na nhazi Google Maps eji ihe ọ bụla usoro nhazi nke ụwa.
Na nkenke, o yiri a nnukwu nzọụkwụ tụnyere Plex.Earth Web Map Services nke kwukwara gakọrịta Google Earth oyiyi na-anọchi anya ndị na-AutoCAD na-enweghị, na eleghị anya na-agaghị na obere okwu.
Ana m akwado ihe m kwuru tupu mgbe m hụrụ maka oge mbụ Plex.Earth: Mfe nke azịza sitere n'aka ndị enyi a bụ ihe ijuanya:
Chọrọ onyonyo ụwa google na AutoCAD? Lee ya ebe a
Na mkpebi dị elu? Chọpụta, kpoo ya
N’okporo ụzọ awara awara? Gaa n'ihu, wedata ya dị ka ebe nchekwa na shaft
Ogologo ọkwa? Ọzọkwa
Ugbu a, ọrụ map.
Previous Post«Previous GeoConverter na-esonye n'ime Njikọ
Next Post Onu ogugu Sokkia Series 50, StationNext »
8 Na-azaghachi "Plex.Earth 3.0 Ibu Ọrụ WMS sitere na AutoCAD"
top.ejroca kwuru, sị:
Kedu ka ị bụ?
wụnye plex.earth obodo 3d na reinstall ka 3 ugboro na-amalite na obodo ahụ na ibu na modul nke plexearth ma m na-ahụ ọ dịghị tab, ọ dịghị Contextual menu na dịghị teepu ma ọ bụ banyere plex.
M na-ele anya na ọrụ ọrụ nkịtị.
kedu ihe nwere ike ime ???
ekele x aza
Ihe ọjọọ, enweghị akwụkwọ ntuziaka n'asụsụ Spanish. Mana enwere vidiyo na YouTube nke ọtụtụ ihe Plex.Earth mere
Alberto Rodriguez kwuru, sị:
Ngwá ọrụ a na-adọrọ mmasị ma dị ezigbo uru, Ana m anwale ya mana achọrọ m ịma ma ọ bụrụ
e nwere akwụkwọ ntuziaka na Spanish maka iji na ngwa
Ọ bụrụ n ’ị pụtara ihe dijitalụ ala ihe eji eme ihe na uzo nivesl, ee. Plex.Earth na-arụ ọrụ na ụdị nkịtị AutoCAD ma na-enye gị ikike ịrụ ọrụ nke enwere ike iji naanị Civil3D, dị ka ibubata elu meshes elu, imepụta contours, wdg.
ekele m Enwere m ajụjụ na modul plex. ụwa m nwere ike mbupụ na hec ras n'enweghi autocad obodo ebe ọ bụ na enwere m ọpụrụiche dị mfe
Dị ahụ adịbeghị maka nbudata. Ikekwe na njedebe nke ọnwa Nọvemba ugbua.
Ihe nyochaa m mere bụ ihe nkwado beta nyere anyị.
Enwere m obi abụọ banyere ebe m nwere ike ibudata mbipute 3.0 nke usoro ihe a ebe ọ bụ na ọ bụ na 2.5 mbipute ahụ naanị na ọ bụ naanị na ị nwere ya, ị nwere ike ịkwado ya nke ọma n'oge gara aga.